कोशी अस्पतालमा लगाएको फोन कसरी पुग्छ प्राईभेट क्लीनिकमा ? – Janacharcha.com
» ब्यानर » स्वास्थ्य अंक: 3988
कोशी अस्पतालमा लगाएको फोन कसरी पुग्छ प्राईभेट क्लीनिकमा ?
विराटनगरका स्वस्थ्य क्लीनिकहरुले कोशी अस्पताल र डाक्टरको नाम दुरुपयोग गरी विरामीलाई झुक्याउने गरेको पाईएको छ ।
उनीहरुले आफ्नो क्लिनीकको भिजिटीङ कार्डमा कोशी अस्पतालमा कार्यरत्त डाक्टर र कोशी अस्पतालको नाम दुरुपयोग गरेर विरामीलाई झुक्याउने गरेका छन् ।
झट्ट हेर्दा कोशी अस्पतालकै अफिसियल भिजिटिङ कार्ड जस्तो देखिने गरी निजी क्लीनिक संचालकले फर्जी कार्ड छपाएका हुन्छन् । त्यस्ता भिजिटिङ कार्डमा सम्पर्क नम्बर भने प्राईभेट क्लीनिकको दिईएको हुन्छ । विरामीहरु पनि सरकारी अस्पताल हो भन–ठानेर सो नम्बरमा सम्पर्क गर्ने गर्दछन् । तर उक्त कार्डमा दिईएको नंम्बरमा फोन लगाउदा कोशी अस्पतालमा नभएर कुनै प्राईभेट क्लीनिकमा फोन जाने गर्दछ ।
बिरामीले फोन सम्पर्क गर्दा क्लीनिकका प्रतिनिधिले अस्पतालमा भन्दा राम्रो सेवा क्लीनिकमा पाईने भन्दै विरामीको माईड डाईभर्ट गर्ने काम गर्दछन् । सोझा–साझा विरामीलाई ठगेर, झुक्याएर र डराएरै भए पनि क्लीनिकमै आउन बाध्य पर्दछन् । कार्डको नम्बरमा सम्पर्क गर्ने विरामीलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने गरेको उनीहरुको झाँसामा परेका विरामीहरुले बताउने गरेका छन् ।
कोशी अस्पतालको आसपासमा विभिन्न नाम गरेका क्लीनिक संचालन गर्दै आएका विकाश सरदारले त्यसै गरी फर्जी भिजिटिङ कार्ड बनाई बिरामी झुक्याउदै आएको खुलासा भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने विभिन्न खाल्को अपराधिक क्रियाकलापमा समेत मुछिदै आएको सरदारले विरामी ठग्नको लागी यो नयाँ जुक्ति अपनाएका छन् । सरदार वराम्वार यस्तो विवादमा मुछिदै आएकाले उनले आफ्नो क्लीनिकको नाम र संचालन गर्दै आएको ठाँउमा पनि बेला बेला फेरीरहन्छन् ।
गरिब तथा विपन्न घरपरिवारका विरामीहरु सरकारी अस्पतालमा सर्वसुलभ सेवा लिनको लागी डाक्टरलाई सम्पर्क गर्ने गर्दछन् । फोन निजि क्लिनीकका संचालकले उठाएर विरामीलाई गुमराह बनाउने गरेका छन् । विपन्न र आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका यस्ता विरामी एकातर्फ गुणस्तरीय सेवाबाट बञ्चित हुन्छ भने अर्को तर्फ आर्थिक नोक्सानीमा पर्ने गर्छ ।
सरकारी अस्पतालको नाम प्रयोग गरेर प्राईभेट किल्नीक चालउने ठगीधन्धा भईरहदा समेत सरकारका नियामक निकाय भने बेखबर रहेको छ । त्यस्ता क्लीनिक संचालकलाई खोजी खोजीे कारवाही गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : बिरामी ठग्दै विराटनगरका प्राइभेट क्लीनिक : अनुगमन शुन्य